Kooxda Real Madrid oo qorsheyneysa inay rumeyso riyada Eden Hazard – Gool FM
Kooxda Real Madrid oo qorsheyneysa inay rumeyso riyada Eden Hazard
(Real Madrid) 09 Okt 2018. Warbaahinta dalka Spain ayaa shaaca ka qaaday in Real Madrid ay qorsheyneyso inay ka soo qaadato Eden Hazard kooxda Chelsea xilli ciyaareedka soo socda.
Sida laga soo xigtay barnaamijka “El Chiringuito” ee dalka Spain kooxda Real Madrid ayaa diyaar la ah in ay kula soo wareegto laacibka reer Belgiam ee Eden Hazard 170 milyan oo euros.
Heshiiska Eden Hazard uu ku joogo kooxda Chelsea ayaa wuxuu dhacayaa sanada 2020, Real Madrid ayaana dooneysa inay markale u dhaqaaqdo saxiixiisa, xili Blues ay iyadana qorsheeneyso in qandaraaska ay u kor dhiso laacibka reer Belgiam.
Eden Hazard ayaa horey albaabada ugu furay maamulka kooxda Chelsea inuu saxiixayo heshiis cusub uu kusii joogi doono Stamford Brigue, lakiin wali ma uusan ka quusan inuu ka ciyaaro kooxda Real Madrid.
laacibka reer Belgiam ayaa yiri: “Real Madrid waa kooxda ugu fiican caalamka, ma doonayo inaan ka been sheego, waa riyada tan iyo caruurnimadeyda, waxaan ku riyoon jiray xili kasta kooxdaan, laakiin ma doonayo inaan ka hadlo maalin kasta”.
Kooxda Juventus oo go’aamisay wararka ku aadan in Paul Pogba uu markale dib ugu soo laaban doono Bianconeri
Riyad Mahrez oo ugu dambeyntii afka furtay kana hadlay rigooradii uu qasaariyay kulankii Liverpool iyo Man City